FLiPSi Messenger ကို Download လုပ်ပါ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » FLiPSi Messenger ကို
FLiPSi Messenger ကို APK ကို
FLiPSi ။ တစ်ခုတည်း app ထဲမှာအားလုံးလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်သံတမန်တို့ကို!
FLiPSi - တစ်ခုတည်း app ထဲမှာလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်သံတမနျအပေါငျးတို့သအကျိုးကျေးဇူးများ! ကြော်ငြာတွေကိုစိတျဆိုးခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးလုံးဝအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု! အားလုံးလူကြိုက်များတဲ့လူမှုကွန်ယက်များနှင့်ခေတ်သစ်သံတမန်တို့ကို (Twitter, Yahoo !, ကို Tencent Weibo, Vkontakte, Moi Mir, Jabber, ICQ, ကြေးနန်း, များသည် Sina Weibo, QQ တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဘိုင်ဒူ, Skype ကိုစီစဉ်ထားသည်) ကိုပေါင်းစပ်ပြီး, FLiPSi အဆမဲ့ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ကျယ်ပြန့်အခွင့်အလမ်းတွေပေးထားပါတယ်။ သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ်အဆိုပါရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်း app ကို! ခံစားကြည့်ပါ!
ကြော်ငြာမပါနဲ့လုံးဝအခမဲ့ app ကို
အားလုံးလူကြိုက်များတဲ့လူမှုကွန်ယက် (Twitter, Yahoo !, ကို Tencent Weibo, VK, Moi Mir စသည်တို့ကို) နှင့်သံတမန်တို့ကို (Jabber, ICQ, ကြေးနန်းစသည်တို့) နဲ့ပေါင်းစည်းရေး
မက်ဆေ့ခ်ျ၏လုံခြုံလဲလှယ်မှုအတွက်တမူထူးခြားတဲ့ချက်တင် encryption algorithm
လူမှုရေးကွန်ယက်အကောင့်မှအဆမဲ့ access ကို
ကမ္ဘာတဝှမ်းလူမှုကွန်ယက်မှတည်ငြိမ် access ကို
ချိန်း geolocation အချက်အလက်များနှင့်အစည်းအဝေးများစီစဉ်
ခုနစျပါးသောဘာသာစကားတစျခုရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုမိတ်ဖက်နှင့်အတူတစ်ဦး shared ဘာသာစကား Find
iOS နှင့် Android ပေါ်မှာ Tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများအတွက် universal app ကို
FLiPSi သင်သည်သင်၏စာပေးစာယူ၏ privacy ကိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်အာရုံထွေပြားသောကြော်ငြာသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးခံစားရန်ခွင့်ပြုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူ privacy ကိုမှသူတို့ဘက်၌တရားကျင့်သုံးကူညီရန်ဒီဇိုင်းထူးခြားတဲ့ encryption ကို algorithm ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ တတိယပါတီများမှရန်သင့်စာပေးစာယူနှင့်၎င်း၏တပိုင်တနိုင်၏ privacy ကိုသေချာမက်ဆေ့ခ်ျ၏ encrypt လုပ်ထားတဲ့ချက်တင်အာမခံချက်လုံခြုံလဲလှယ်။
ထို့အပြင် app ကိုသင်အွန်လိုင်းနေဖို့သူတို့လက်လှမ်း encrypted gateway များကတဆင့်ကန့်သတ်ထားသည်အဘယ်မှာရှိအချို့သောနိုင်ငံများရှိတပိုင်တနိုင်များမှာပင်လျှင်သင်အကြိုက်ဆုံးလူမှုရေးကွန်ရက်မှာဆက်သွယ်ပြောဆိုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဤသည် FLiPSi နေ့စဉ်တာဝန်များကိုများအတွက်ပေမယ့်ချက်ချင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်တစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးဘို့မသာအမှန်တကယ်အဆင်ပြေပြေနဲ့အကျိုးရှိစွာဆက်သွယ်ရေး tool ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သငျသညျစိတျပူစရာမလိုပါ: သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာစာပေးစာယူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေဖို့ပါလိမ့်မယ်နှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်များလျှို့ဝှက်ချက်နေဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးသင့်ရဲ့များ၏ privacy ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သောကြောင့်ဤသူကားအ
ဒီ app အင်္ဂလိပ်, ရုရှား, ယူကရိန်း, ပြင်သစ်, အီတလီ, ဂျာမန်နှင့် Chinese သို့ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုခဲ့သည်။
FLiPSi ဝေးကွာသောဆက်သွယ်ရေးကိရိယာသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်အသွင်ပြောင်းမည်! ဒါဟာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install app ကိုအပေါင်းတို့နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများခံစားစတင်ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသာ။ ရုံ FLiPSi ကို download လုပ်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးအသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ။
FLiPSi နှငျ့ဆကျသှယျ, အခမဲ့လုံခြုံရေးနှင့် AD-အခမဲ့ပါ!
Facebook မှာ: facebook.com/flipsiapp
Google+ မှာ: plus.google.com/+Flipsiapp/posts
Skype ကို: flipsi_support
Infinite ဝေါဟာရရငျးမွစျ: အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
အောက်တိုဘာလ 16, 2015 မှာ 1: 57 ညနေ